Dr. Tint Swe's Writings: Genital warts treatment လိင်လမ်းကြွက်နို့ ကုသနည်းများ
လိင်လမ်းကြွက်နို့ ၉ဝ% ဟာ HPV6or 11 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ HPV 16, 18, 31, 33 နဲ့ 35 တွေကနေ နည်းနည်းဖြစ်တယ်။ HPV6or 11 ပိုးတွေက မျက်စိ၊ နှာခေါင်း၊ ခံတွင်းနဲ့ လေပြွန်နေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
လိင်လမ်းကြွက်နို့က အများအားဖြင့် ဘယ်လိုမှ ခံစားနေရတာ မရှိပါ။ အရွယ်အစားနဲ့ ဖြစ်တဲ့နေရာအရ နာတာ၊ ယားတာ ဖြစ်မယ်။ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါနဲ့ မိန်းမလိင်အင်္ဂါနေရာတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ တနေရာမကလည်း ဖြစ်တယ်။ အများအားဖြင့် အမြင်နဲ့ ရောဂါဟုတ် မဟုတ်သိတယ်။ လိုအပ်မှသာ အသားစဖြတ်ယူစစ်ဆေးတယ်။ 3%–5% acetic acid အက်စစ်နဲ့ တို့လိုက်ရင် အဖြူရောင်ပြောင်းတာနဲ့လည်း သိနိုင်တယ်။
ကုရတာက ခံစားတာရှိနေသူတွေကို လုပ်ပေးရတယ်။ တချို့ကြွက်နို့က ဆေးမကုပဲလည်း မမြင်နိုင်အောင် ပျောက်သွားတယ်။ ကုသနည်းတွေကနေ ရောဂါလုံးဝကင်းစင်မသွားစေနိုင်ပါ။ သူများကို ကူးစက်နိုင်မှုလည်း ပျောက်မသွားစေနိုင်ပါ။ ဆောရီး။
ကုသနည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ လက်လှမ်းမီတာ လုပ်ရတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုလည်းလိုတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ အရောင် ဖြူသွားတာနဲ့ ပိုရင့်သွားတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နိမ့်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမာရွတ်ထင်ကျန်နေနိုင်တယ်။
၁။ Podofilox 0.5% solution or gel
၂။ Imiquimod 5% cream
၃။ Sinecatechins 15% ointment
၁။ Cryotherapy with liquid nitrogen or cryoprobe. Repeat applications every 1–2 weeks.
၂။ Podophyllin resin 10%–25% inacompound tincture of benzoin
၃။ Trichloroacetic acid (TCA) or Bichloroacetic acid (BCA) 80%–90%
၄။ Surgical removal either by tangential scissor excision, tangential shave excision, curettage, or electrosurgery
Podofilox ဆေးဟာ antimitotic ဆေးဖြစ်တယ်။ ဈေးမကြီးပါ။ Podofilox solution ဆေးရည်ကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ ထည့်ရတယ်။ podofilox gel ကို လက်ချောင်နဲ့ လိမ်းပေးနိုင်တယ်။ ၃ ရက်လုပ် ၄ ရက်နား။ အဲလို ၄ ကြိမ်လုပ်နိုင်တယ်။ တနေ့မှာ ဆေး 0.5 mL ထက်မများရ။
Imiquimod ဆေးက active immune enhancer ဖြစ်တယ်။ interferon ထွက်လာစေဘို့ နိုးဆွပေးတယ်။ Imiquimod cream ကို တနေ့ တကြိမ်၊ ညအချိန်မှာလိမ်းပါ။ တပတ်မှာ ၃ ကြိမ်။ စုစုပေါင်း ၁၆ ပတ်ကြာ။ ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ၆-၁ဝ နာရီအကြာမှာ ရေနဲ့ တပ်ပြာသုံး ဆေးပါ။ ဆေးအရှိန်ကြောင့် နီရဲလာမယ်။ အနေရခက်မယ်။ အနာလိုဖြစ်မယ်။ အဖုပေါက်မယ်။ အရေင်နုသွားမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သင့် မသင့် မပြောနိုင်။
Sinecatechin ointment ဆေးက လက်ဖက်ရွက်ကနေထုတ်တာ။ တနေ့ ၃ ကြိမ်။ ကြွက်နို့တခုအတွက် ဆေးအရှည် 0.5-cm သုံးပါ။ ၁၆ ပတ်ထက် ပိုမကြာသင့်။ ဆေးလိမ်းပြီး ဆေးဘို့ မလိုပါ။ ဆေးရှိနေချိန်မှာ အတူနေတာကို ရှောင်ထားပါ။ ဆေးကြောင့် နီရဲမယ်။ ယားမယ်။ ပူလောင်မယ်။ အနာဖြစ်မယ်။ HIV ရှိနေသူတွေ မသုံးသင့်။
Cryotherapy အေးခဲနည်းကို ဆရာဝန်ကလုပ်ပေးမှရတယ်။ liquid nitrogen သုံးတယ်။ ထုံဆေးလိုနိုင်တယ်။ တစ်ရှူးတွေ သေသွားမယ်။ အဖုပေါက်နိုင်တယ်။
Pedophyllin resin 10%–25% ဆေးနည်းသုံးရင် ခြောက်စေပြီးမှ အဝတ်အစားနဲ့ထိရမယ်။ တပတ်တခါ။ လိုသေးထပ်လုပ်။ တကြိမ်မှာ <0.5 mL of podophyllin သို့မဟုတ် <10 cm2 of warts ထက်မပိုသင့်။ အနာမျာ တခြားအနာမရှိစေရ။ ၁-၄ နာရီအကြာ သေချာ ဆေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်မှာ မသုံးသင့်။
TCA and BCA ဆေးတွေက ကြွက်နို့တစ်ရှူးတွေ လောင်စေတယ်။ လေ့လာမှု နည်းသေးတယ်။ ဆေးက ဘေးကိုပြန့်စေတာသတိထားပါ။ နည်းနည်းလေးသူသုံးရမယ်။ အဖြူမြှုပ်ထလာမယ်။ နာတာမခံနိုင်ရင် ဆပ်ပြာ ဒါမှမဟုတ် sodium bicarbonate မုံ့ဖုတ်ဆောက်ဒါနဲ့ ဆေးပါ။
Surgical therapy ခွဲထုတ်နည်းကို ထုံဆေးနဲ့လုပ်တယ်။ သွေးထွက်တာထိန်တဲ့ electrocautery ကနေ အမာရွတ်ကျန်မှာ သတိထားပါ။ ပြန်ချုပ်ဖို့ မလိုတတ်ပါ။ carbon dioxide laser လည်းသုံးနိုင်တယ်။
လိင်လမ်းကြွက်နို့ကနေ သားအိမ်ဝကင်ဆာဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ ၁ဝဝ% တော့ မဟုတ်ပါ။ အသက် ၂၆ နှစ်အောက် သားအိမ်ဝကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်ကျော်သူတွေနဲ့ ကြွက်နို့ပေါက်ပြီးသူတွေ ကာကွယ်ဆေး မလိုတော့ပါ။ အရပ်နည်းတွေ မသင့်ပါ။ သားအိမ်ဝကင်ဆာကို Pap smear test စမ်းသပ်ရင်သိမယ်။ စောစာသိလေ ကောင်းလေ။
1. Cancer of the Uterus သားအိမ်-ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cancer-of-uterus.html
2. Cancers of Women Reproductive system အမျိုးသမီး မျိုးပွါးလမ်းမယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/cancers-of-women-reproductive-system.html
3. Cervarix သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cervarix.html
4. Cervical Cancer & Virgins သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ အပျို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/cervical-cancer-in-virgins.html
5. Cervical Cancer (1) သားအိမ်အဝ ကင်ဆာ (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/cervical-cancer-1.html
6. Cervical Cancer (2) သားအိမ်ဝကင်ဆာ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-2_24.html
7. Cervical cancer in virgins သားအိမ်ဝကင်ဆာနဲ့ အပျို http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/cervical-cancer-in-virgins.html
8. Cervical Cancer New Guidelines သားအိမ်ဝကင်ဆာ ဆေးစစ်ခြင်း အသစ်ပြဌာန်းချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-new-guidelines.html
9. Cervical cancer test DIY သားအိမ်ဝကင်ဆာ ကိုယ့်ဖါသာ စမ်းသပ်နည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/cervical-cancer-test-diy.html
10. Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) သားအိမ်ဝ ရောဂါတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cervical-intraepithelial-neoplasia-cin.html
11. Genital warts in women အမျိုးသမီး လိင်လမ်းကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/genital-warts-in-women.html
12. Genital warts လိင်လမ်းကြွက်နို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/genital-warts.html
13. HPV vaccine and Marriage သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးနှင့် လက်ထပ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/hpv-vaccine-and-marriage.html
14. HPV Vaccine for Ca Cx သားအိမ်အဝ-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-hpv-vaccination_4.html
15. Pap smear သားအိမ်ဝကင်ဆာ စမ်းသပ်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/pap-smear.html
16. Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hpv-vaccine-for-ca-cx.html
17. Pregnancy and HPV Vaccination သားအိမ်-ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/hpv-vaccine-for-ca-cx.html
20. Warts ကြွက်နို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/warts.html